Isicelo seVisa sezivakashi saseNew Zealand, Visa yase-New Zealand ye-ETA Visa
Ukubuka konke kwe-NZeTA
I-Visa Yezokuvakasha yaseNew Zealand
Ukubuka konke kwe-New Zealand eTA
Izinhlobo ze-Visa zaseNew Zealand
Umhlahlandlela Wefomu Lokufaka Isicelo
Ukuza nge-Cruise Ship
Ukuhlolwa Kwezokuphepha Komngcele
Imisebenzi ivunyelwe ku-NZeTA
Amathiphu Wokuvakasha Wabavakashi
I-New Zealand eTA yezakhamizi zase-US
I-New Zealand eTA yezakhamizi ze-EU
I-New Zealand eTA yezakhamizi zaseCanada
I-New Zealand eTA yezakhamizi zaseBrithani
I-New Zealand eTA yezakhamizi zaseFrance
Indlela yokuphila yaseNew Zealand
Imininingwane Yesimo Sezulu Nemali
Ukunambitheka Kwesiko LamaMaori
Izinguzunga zeqhwa ezidumile
Imikhosi eNew Zealand
Ukuhlola iMount Cook
Amabhishi Aphezulu eNew Zealand
I-Lord Of The Rings Experience
I-Abel Tasman National Park
Izindawo zokudlela eziphuma phambili zokomdabu wase-Auckland
Ezemidlalo Ezithandekayo Kakhulu ZZ
I-Adventures Ephezulu eNew Zealand
Ukushushuluza eNew Zealand
I-Skydiving eNew Zealand
Ukuhamba Komgwaqo waseNew Zealand
Ukudla okuhlukile kweNew Zealand
Umhlahlandlela Wezokuvakasha WeChatham Islands
Amahora angu-24 e-Auckland
Imibuzo Evame Ukubuzwa yeNZeTa
Yini i-New Zealand eTA?
Ngidinga i-New Zealand eTA?
I-NZeTA vs New Zealand Visa
Ukuza ngomkhumbi we-Cruise?
Isebenza isikhathi esingakanani i-NZ eTA?
Ngingahlala isikhathi esingakanani?
Yonke Imibuzo Ebuzwa Njalo »
Imininingwane yeVisa Yezokuvakasha yaseNew Zealand yazo zonke Izivakashi ezifuna uhambo lwesikhashana oluya eNew Zealand
Kusukela nge-1 Okthoba 2019, izivakashi ezivela emazweni eVisa Free ezaziwa nangokuthi i- Amazwe we-Visa Waiver kufanele ufake isicelo ku- https://www.new-zealand-visa.co.nz ukuthola ukugunyazwa kwe-inthanethi kwe-elektroniki kokuhamba ngendlela ye-Visa Yezokuvakasha yaseNew Zealand.
Lapho wenza a Isicelo seVisa yabavakashi baseNew Zealand online, ungakhokha imali encane ebhekiswe kwi-International Visitor Levy kanye ne-Electronic Travel Authority ngokuthengiselana okukodwa. Kufanele ube nepasipoti evumelekile evela kwelinye lamazwe we-Visa Waiver ukungena eNew Zealand ku-NZ eTA (New Zealand electronic Travel Authorization).
Ukhomba Ukukuqaphelisa I-Visa Yesivakashi SaseNew Zealand:
Sicela uqinisekise ukuthi ifayela lakho le- ipasipoti isebenza izinyanga ezintathu ngosuku lokungena eNew Zealand.
Kufanele ube Ikheli Elilungile le-Imeyili ukwamukela ukugunyazwa ngogesi.
Kufanele ube nakho ikhono lokwenza ukukhokha online ngezindlela ezinjengekhadi lesikweletu / ledebithi noma i-Paypal.
Inhloso yokuvakasha kwakho kumele ibe ehlobene nezokuvakasha.
Ukuvakashelwa kwezokwelapha eNew Zealand dinga iVisa ehlukile lapho i-New Zealand Tourist Visa (NZ eTA) ingahlanganisi khona, bhekisa ku- Izinhlobo ze-Visa zaseNew Zealand.
Awudingi iVisa yezivakashi yaseNew Zealand uma ungumhlali waseNew Zealand ohlala njalo noma umnikazi wepasipoti wase-Australia (isakhamuzi). Izakhamizi ezihlala unomphela e-Australia, kepha, kufanele zifake isicelo seNew Zealand Tourist Visa (NZ eTA).
Ukuhlala kwakho eNew Zealand ukuvakasha okukodwa akumele yeqe izinsuku ezingama-90.
Akufanele ube nokutholakala enecala lobugebengu.
Akufanele ngabe kudlule umlando wokudingiswa kusuka kwelinye izwe.
Uma uHulumeni waseNew Zealand enezizathu ezanele zokukholelwa ukuthi unamacala okuphasa, kusho ukuthi owakho I-Visa Yezokuvakasha yaseNew Zealand (NZ eTA) kungenzeka ingavunyelwa.
Imibhalo idingeka ku-New Zealand Tourist Visa
Udinga okulandelayo okulungele isicelo sakho saseNew Zealand ngenhloso yokubona nokubuka ezokuvakasha.
Iphasiphothi evela emazweni afanelekayo we-visa.
Ukusebenza kwezinsuku ezingama-90 kwepasipoti ngosuku lokungena.
Amakhasi amabili angenalutho ukuze umphathi wamasiko akwazi ukugxiviza esikhumulweni sezindiza. Qaphela ukuthi ASIDingi ukubona ipasipoti yakho noma ube nekhophi e-scan noma uthumele ipasipoti yakho. Sidinga kuphela inombolo yakho yepasipoti, usuku lokuphelelwa yisikhathi.
Igama lakho, igama eliphakathi, isibongo, usuku lokuzalwa kufanele ifane ncamashi njengoba kushiwo kuphasiphothi ngaphandle kwalokho ukugibela esikhumulweni sezindiza noma ethekwini kunganqatshwa.
Ikhadi lesikweletu / lasebhange noma imininingwane ye-akhawunti ye-Paypal.
Ungayithola kanjani iVisa yezivakashi yaseNew Zealand
Ungafaka isicelo online ngokusebenzisa inqubo elula, eqondile nenemizuzu emibili ku-inthanethi ku Ifomu Lokufaka Isicelo laseNew Zealand ukuthola i-New Zealand Travel Travel Authorization (NZ eTA) yakho.
Qinisekisa ukuthi uhlolile ukufaneleka kwe-New Zealand eTA yakho.
Uma uvela ku Izwe le-Visa Waiver lapho-ke ungafaka isicelo se-eTA kungakhathalekile indlela ohamba ngayo (i-Air / Cruise). Izakhamizi zase-United States, Izakhamizi zaseCanada, Izakhamizi zaseJalimane, futhi Izakhamizi zase-United Kingdom can faka isicelo ku-inthanethi se-New Zealand eTA. Izakhamizi zase-United Kingdom zingahlala e-New Zealand eTA izinyanga eziyisithupha kanti ezinye izinsuku ezingama-6.
Sicela ufake isicelo se-New Zealand eTA amahora angama-72 ngaphambi kwendiza yakho.
SEBENZISA ISICELO SE-NZeTA
ENEW ZEALAND eTA
INEW ZEALAND eTA ISIQEPHU
IFOMU LESICELO LE-NZeTA
AMAZWE ENZETA ELIGIBILE
NZeTA VISA WAIVER AMAZWE
Imininingwane ye-NZeTA YESIVAKASHI
UMHLAHLA WOKUFAKA ISICELO
I-NZeTA vs VISA OKUVAMILE
IMISEBENZI EVUNYELWE KU-NZeTA
EZA NGOMKHUMBI WOKUQALA
INDLELA YOKUPHILA YASEZEALAND
ULWAZI LOKUHANJISWA NESIMO SEZULU
Ukunambitha KWESIKO LAMAMORI
UKUHLOLA UKUPHEKA KWENTABA
KUMELE UBONE I-QUEENSTOWN
UKUDLA OKUQHELEKILE OKUQHELEKILE ZEALAND
UMHLAHLANDLELA WEZIQHINGA ZECHATHAM
UKUHAMBA OKUYISHUMI KWAKHULU
KUMELE UBONE AMANZI
Amabhishi AYI-TOP 10
INKOSI YAMALINGE RING
ABADLALI ABADLULA KAKHULU E-AUCKLAND
IMIDLALO ETHANDA KAKHULU
IZINZAKALO EZIPHAKEME E-NZ
UKUSUKA EBHAYIBHILI ENEW ZEALAND
UKUSUKA ESKHWINI ENEW ZEALAND
UHAMBO LWEMigwaqo ENEW ZEALAND
I-ABEL TASMAN PARK KAZWELONKE
IFIORDLAND PARK KAZWELONKE
AMAHORA AMA-24 E-AUCKLAND
I-WAITOMO GLOWWORM CAVES
Faka isicelo se-NZeTA
© copyright ngu-www.new-zealand-visa.co.nz
Ukuzikhulula: I-New Zealand eTA / Visa ekhishwe yile webhusayithi yezentengiso isetshenziswa ngqo kuwebhusayithi kahulumeni yaseNew Zealand Immigration (www.immigration.govt.nz). Sinikeza usizo kuma-Travel Agents nabahambi emhlabeni wonke. Uhulumeni waseNew Zealand akayikhethanga le webhusayithi ngqo, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Imali ekhokhelwayo ikhokhiselwa izinsizakalo zethu kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi. Imininingwane engaphezulu maqondana nezimali zethu iyatholakala ku Mayelana NATHI ikhasi.